Hurumende Inopa Mari yeBudiriro kuMatunhu
Gunyana 02, 2010
Gurukota rinoona nezvenyaya dzebumbiro remutemo pamwe nemabasa eparamende, VaEric Matinenga, vazivisa kuti mari yebudiriro munzvimbo dzinomirirwa nenhengo dzeparamende kana kuti Constituency Devlopment Fund yavepo.
Asi VaMatinenga vati havasi kufara nekuti nhengo dzeparamende hadzisi kunyorera kubazi ravo kuti dzishandise mari iyi. VaMatinenga vati matunhu maviri chete ndiwo akanyorera mari iyi. Hurumende yakaisa mari inoita mamiriyoni mana emadhora ekushandisa muchirongwa ichi. Dunhu rimwe chete rinofanirwa kunge richiwana mari inoita zviuru makumi mashanu emadhora, asi VaMatinenga vati pari zvino dunhu rimwe chete riri kupihwa mari inoita zviuru makumi maviri nezvishanu zvemadhora, sezvo imwe mari yacho isati yavapo.
Nhengo dzeparamende dzinoti dziri kufara zvikuru nemari yebudiriro yenzvimbo dzadzinomirira iyo iri kubva kubazi rezvebumbiro remitemo nemabasa eparamende.
Dunhu roga-roga richange richitarisirwa kuwana mari iyo inotarisirwa kushandiswa mukugadzurudza migwagwa, zvikoro, makirinika, nemamwewo mabasa ebudiriro emunharaunda dzavanomirira.
Asi nhengo dzeparamende idzi dzinoti hadzisati dzawana nguva yekuti dzinyorere mari iyi, sezvo pachida kutanga pagarwa pasi nemakanzura emunzvimbo dzavo, kuitira kuti vawirirane kuti voshandisa mari iyi mumabasa api.
Izvi zvinonzi zviri kutadziswa nemhaka yekuti nhengo dzeparamende pari zvino dziri kushanda muhurongwa hwekunzwa pfungwa dzevanhu pakunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika.
Mukokeri weMDC inotungamirirwa naVaMorgan Tsvangirai muparamende, VaInnocent Gonese, vanoti kana vapedza kuita basa rekunyora bumbiro idzva, nhengo dzeparamende dzichanyorera mari iyi.
Ukuwo vanokokera Zanu PF muparamende, VaJoram Gumbo, vanoti mari iyi ichabatsirawo matunhu kuita zvaanoda kuita.